Kuthekani ukuba ukuthengisa kwakho kuyasebenza? | Martech Zone
Njengomqeqeshi wentengiso ndisebenza neenkampani kuluhlu olubanzi lwamashishini. Kwaye phantse yonke inkampani endisebenza nayo ichitha ngaphezulu kulo nyaka kunokugqibela kuthengiso olugxile kwi-intanethi, kubandakanya nemidiya yoluntu.
Ngelishwa kuninzi lwezi nkampani, ukuthengisa kwabo nge-intanethi kuyaqala ukusebenza kwaye bafumana iifowuni kunye ne-imeyile evela kubathengi abakhuthazayo abafumene nabalandela kwi-intanethi. Kodwa bayaqaphela umkhwa ophazamisayo, ukuthengisa kunokudala izikhokelo kodwa amaqela okuthengisa anengxaki ngakumbi kunangaphambili.
Amathemba e-Intanethi ayingabo abantu owawuthengisa kwiminyaka emi-3 eyadlulayo. Abo bantu basuka kwiminyaka emi-3 eyadlulayo bebesazi okuncinci ngawe, bebengayazi ncam into oyithengisileyo okanye othengise ngayo. Babengenalo nofifi ngento oyenze kakuhle okanye naluphi na uluvo malunga nento onokuyenza kakubi. Ngapha koko, kwiminyaka emi-3 eyadlulayo xa ubuza esona sicelo siqhelekileyo kwithemba lokuba 'undixelele ngento oyenzayo nendlela oyenza ngayo. Ithemba lanamhlanje alifuni kwazi? Wenzani kwaye wenza njani. Kwaye oko kubangela ukunqunyulwa phakathi kwabathengi kunye nabathengisi ngoku.
Ithemba lanamhlanje liye lakukhathaza, watyelela iphepha lakho le-facebook, walilandela kwi-twitter kwaye wafunda uphononongo malunga nawe kwi-yelp. Bayayazi into oyenzayo, uyenza njani kwaye zonke iinkcukacha ezingcolileyo zempazamo ozenzileyo kunyaka ophelileyo. Banesizathu sokunxibelelana nawe kwaye ayikuko ukuba bafundelwe incwadana.
Ithemba elitsha alifuni ukufunda ngawe-kuwe. Bayayazi uninzi lwayo ngaphambi kokuba ufikelele kubo. Ukuba ukuthengisa kwakho kudala izikhokelo kunye neqela lakho lokuthengisa alinakuzivala ingxaki ayisiyiyo imigangatho yokukhokela kwakho. Ingxaki ngesiqhelo ngumgangatho wenkqubo yentengiso ovumela iqela lakho lokuthengisa ukuba liyisebenzise.
Ukuba inkqubo yakho yokuthengisa yenzelwe ukuxelela abantu ngawe ayilunganga kwaye kufuneka utshintshe.
Qinisekisa ukuba ishishini lakho linenkqubo yokufumana ngoba ithemba linxibelelana nawe. Xa uziqonda iimfuno zethemba, ke ubeka ngokwenyani ishishini lakho endaweni ukuze uphumelele nabathengi banamhlanje.
tags: Ukuthengisa ibluetoothWordPress
Sebenzisa iiNethiwekhi zeNtlalo zeCRM